Grand Royal Group International (GRGI) - Uncategorized Archives - Grand Royal Group International (GRGI)Uncategorized Archives - Grand Royal Group International (GRGI)
CEO Mr. Rahul Colaco’s Profile
Mr. Rahul Colaco (Chief Executive Officer) Grand Royal Group International Co,Ltd
Mr. Rahul Colaco is the CEO of Grand Royal Group International, having joined the organization in October 2020.
He isabusiness leader withatrack record of leading diverse teams, building successful organisations and creating strong shareholder value in challenging business environments. He brings with him 23 years of global FMCG experience in leadership and change management roles in emerging and developed markets across Food & Beverage and Home & Personal Care categories, in Asia, Europe & Africa.
Co-Chairman U Aung Moe Kyaw Photograph
Posted on January 29, 2021 December 29, 2021
နိုင်ငံတော်က ချီးမြှင့်ဂုဏ်ပြုသော ထိပ်တန်းအခွန်ထမ်းကြီးဆုကို (၅) နှစ်ဆက်တိုက် ရယူလျက်၊ Grand Royal Group International က ကုမ္ပဏီ တည်ထောင်ခြင်း (၂၅) နှစ်မြောက် ၊ ငွေရတုနှစ်ပတ်လည်ကို ဆင်နွှဲခဲ့
Grand Royal Group International (GRGI) သည်၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင်၊ နာမည်ကျော် ဝီစကီ အမှတ် တံဆိပ်များကို ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးသည့် ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်၊ ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း (၂၅) နှစ် ပြည့်၊ ငွေရတုနှစ်ပတ်လည်ကိုဆင်နွှဲခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ နှစ်ပေါင်း ( ၂၅) နှစ်ကြာ၊ အတွေ့အကြုံများကြောင့်၊ မြန်မာ ပြည်တွင်း ယမကာထုတ်လုပ်ခြင်းကဏ္ဍတွင်၊ ဦးဆောင်နိုင်ခြင်းကို အများက အသိအမှတ်ပြုထားခြင်းလည်း လက်ခံရရှိထားသည်။ နိုင်ငံတွင်းတွင်၊ ဆုတံဆိပ်များသာမက၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာက အသိအမှတ်ပြုသော၊ ထိပ်တန်း ဝီစကီအမှတ်တံဆိပ်များတွင်၊ အကောင်းဆုံးဝီစကီ အတွင်းတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။
GRGI ၏ တွဲဖက်ဥက္ကဌ၊ ဦးအောင်မိုးကျော်က၊ “ကုမ္ပဏီ (၂၅) နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်နဲ့အတူ၊ အခါ အခွင့်ကြုံခိုက်၊ ကျွန်တော်တို့၏ အမှုဆောင်အရာရှိအသစ်ဖြစ်သူ၊ Mr. Rahul Colaco ကို ကြိုဆိုပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ GRGI အနေနဲ့ တာဝန်ကျေပွန်တဲ့ နိုင်ငံ့သားကောင်းကုမ္ပဏီအဖြစ်၊ နိုင်ငံတော်ကို အခွန်အခ တွေ ပေးဆောင်ခဲ့တာ၊ အခုဆိုရင် အများဆုံးအခွန်ထမ်းဆောင်သူ စာရင်းမှာပါဝင်လို့၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ကနေ၊ ဂုဏ်ပြုတဲ့ ဆုတွေကို ချီးမြှင့်တာ (၅) နှစ်တာဆက်တိုက်ရှိပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ အများ ပြည်သူအတွက်၊ အခွန်အခတွေကနေရတဲ့ ဘဏ္ဍာငွေဟာ အင်မတန်အရေးပါမှန်း သိရှိနားလည်ထားတဲ့ အတွက်၊ ကျွန်တော်တို့ ထမ်းဆောင်ရမယ့်၊ အခွန်အခတွေကို တာဝန်ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်ဖို့၊ အထူး အလေးထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ (၂၀၁၈-၂၀၁၉) စည်းကြပ်ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ၊ စုစုပေါင်း (၁၁၃.၉) ဘီလီယံကျပ်ငွေ၊ အခွန်ထမ်း ဆောင်ထားပါတယ်။” ဟုဆိုသည်။
အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဖြစ်သူ၊ Mr. Rahul Colaco က “အခု ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှာ၊ ထုတ်ကုန်တွေ ပိုမိုတိုး တက်ဖို့၊ သုတေသနတွေ၊ အရည်အသွေးထိန်းသိမ်းတာတွေ၊ လူမှုအသိုင်းအဝန်းတွေကို စောင့်ရှောက်တဲ့ အစီအစဥ်တွေအတွက် ရာထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုထက်ထိ၊ ကျွန်တော်တို့ အသုံးပြုတဲ့ ကုန်ကြမ်းဆန်ကွဲ တန်ချိန်ပေါင်းများစွာကို ပြည်တွင်းက တောင်သူတွေဆီကနေ၊ ဝယ်ယူအားပေးတဲ့အတွက်၊ ပြည်တွင်းက တောင်သူတွေအတွက်၊ မြန်မာကျပ်ငွေ ဘီလီယံနဲ့ချီပြီး ဝင်ငွေတွေရအောင် ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။” ဟုဆို သည်။
ကုမ္ပဏီ၏ ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်သည့်” နိုင်ငံ့သားကောင်းကုမ္ပဏီဖြစ်တည်ရေး” နှင့်အညီ၊ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး၊ အမျိုးသားအဆင့်ဗဟိုကော်မတီ နဲ့ ကျန်းမာ ရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနများ၏ လမ်းညွှန်မှုများ ခံယူခဲ့ပြီး၊ ပထမလှိုင်းစတင်ကတည်းက၊ လူထုအ ထောက်အပံ့အဖြစ်၊ မြန်မာကျပ်ငွေသိန်း (၅,၀၀၀) တန်ဖိုးရှိသော၊ လက်သန့်ဆေးရည်ဗူးပေါင်း (၂၀၀,၀၀၀) ကို နိုင်ငံတဝန်းမှာရှိ၊ ဆေးရုံများ၊ ကွာရန်တင်းစင်တာများ၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ၊ သီလရှင်ကျောင်းများ၊ နှင့်ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းများကို လှူဒါန်းခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၊ အခြေခံလူမှုအသိုင်းအဝန်းများအတွက်၊ အဓိက လိုအပ်သော၊ ပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းစည်းများ၊ ဆန် နှင့် ဆီ အခြေခံစားသောက်ကုန်များကိုလည်း၊ ထောက်ပံ့လှူ ဒါန်းထားသည်။ မကြာသေးမီကပင်၊ ကုမ္ပဏီအနေနှင့် ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း (၂၅) နှစ်မြောက်၊ ငွေရတုအ ထိမ်းအမှတ်အနေနှင့်၊ မြန်မာကျပ်ငွေသိန်း (၂,၀၀၀) တိတိကို၊ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူရရှိရေး ရန်ပုံငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဆပ်ကော်မတီ သို့ UMFCCI အသင်းကြီးမှတဆင့် လှူဒါန်းထားပြီး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အား ကစားဝန်ကြီးဌာနနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့တို့ ဦးဆောင်သည့် “STOP COVID-19 Yellow Campaign” လှုပ်ရှားမှုတွင်၊ New Normal နှင့်အညီ လုပ်ငန်းဆက်လက်လည်ပတ်ရေးအား ရှေးရှူ၍ ပူး ပေါင်းပါဝင်ခဲ့သည်။
ပြည်ပထိုင်းနိုင်ငံတွင်၊ ‌ရောက်ရှိအလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသော၊ မြန်မာပြည်သူအများ၊ GRGI ၏ ဒါရိုက် တာနှင့်အဓိက၊ ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူ၊ အစုရှယ်ယာဝင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီ ဖြစ်သည့် Thai Beverage Public Company Limited မှ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်၏ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူ Mr Polapatr Suvarnazorn က ဦးဆောင်ပြီး၊ COVID-19 တစ်ကိုယ်ရေသုံး အကာအကွယ်ပစ္စည်းများ ဖြစ်သည့်၊ နှာခေါင်းစည်း အရေအတွက် စုစုပေါင်း (၂၀,၀၀၀) ခု၊ အရက်ပျံပမာဏ (၇၂) ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်သော၊ အရက်ပျံ (၁၀၀) လီတာနှင့် လက်သန့် ဆေးရည်ဂျဲလ်ဘူး (၂၀) ကို ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့ရှိ၊ ပြည်‌ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံသံရုံး၌၊ သံအမတ်ကြီး ဦးမျိုးမြင့်သိန်းထံသို့၊ မကြာသေးမီက လှူဒါန်းခဲ့သည်။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ကုန်၊ ကိန်းဂဏန်းများအရ၊ မွန်ပြည်နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်းနှင့် မကွေးတိုင်းများရှိ၊ ကျေးရွာပေါင်း (၁၃၁) ရွာရှိ၊ အိမ်ခြေပေါင်း (၁၂,၃၇၉) အိမ်ခြေမှ အများ ပြည်သူပေါင်း (၇၃,၃၃၄) ဦးအတွက်၊ သောက်သုံးရေကြည်ရေသန့်များရရှိရန်၊ ရေတွင်းများ၊ ရေပိုက်လိုင်း များ၊ တိုင်ကီများ တည်ဆောက် တပ်ဆင်ပေးကာ၊ ပညာပေးလုပ်ငန်းများလည်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
Job Net Myanmar Co., Ltd က ကြီးမှူးခဲ့သည့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွက် “မြန်မာနိုင်ငံတွင်အလုပ် လုပ်ကိုင်ရန် အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီများ (Best Companies to Work in Myanmar 2020, BCIM) ဆု” လုပ်ငန်းရှင်များ၏ထူးချွန်မှုအပေါ်ဂုဏ်ပြု အသိအမှတ်ပြုသည့် Myanmar Employer Awards 2020 အခမ်းအနား၌အလုံးစုံကဏ္ဍတွင်၊ အကောင်းတကာ့အကောင်းဆုံး ပြည်တွင်းအဖွဲ့အစည်းအဖြစ်ဆုအပြင်၊ အခြားသော ဆုအမျိုးအစား (၅) ဆုဖြင့် ထိုက်ထိုက်တန်တန် ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ခံခဲ့ရသည်။